Khaatumo Khiyaanadii Reerka Lagu Khalday Bay Qolo Wadwadaa!! | RUUG-CADDAA
Khaatumo Khiyaanadii Reerka Lagu Khalday Bay Qolo Wadwadaa!!
Posted by Ruugcadaa on February 18th, 2019
Khaatumo Khiyaanadii Reerka Lagu Khalday
Beelweynta SSC weli waxay hibanayaan Khiyaanadii adhax jabka ahayd ee ay ku dhufteen kooxdii uu tukubaha u siday Horgale Galaydh iyo afartii ilkaha la’ahayd ee ay dilootay badh go’a iyo qaadiradu….
Khaatumadii tacabka iyo maalka badani galay markii ay ku saqiirtay magaalada Hargeysa, Aakhirkii qoys yar bay noqotey, qoyskii yaraa ee ay noqoteyna usagii baa guntiga dhexda ugu xidhay inay xaflado bakhti afuufa ka dhigaan wadamaday joogaan…
Marka faashilkaasi qaawan laga yimaado misana haduu doonayaa Horgale Galaydh inuu beentiisii ka bilaabo magaalada Hargeysa iyo saamigii qaybsigii baa noo loo ogolaaday….waxse ka jiraa ma jirto….
Ugu dambayntii shacabweynaha SSC waxaan leeyahay waxba ha u dhegtaaginaa xafladahaasi bakhti afuufka ah ee la doonayo Horgale GALAYDHKII fashilmay in sumcad loogu raadiyo…..si uu baryadii beesha dhexe uu u sii wado…..
La socda xogaha dambe……
« WAR-SAXAAFADEED ka soo baxay dawlada federaalka soomaaliya
Qaadkii laga keeni jiray dalka Kenya oo gabi ahaanba la joojiyay »